トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada dooneysa model dhacdo qowladda pachinko ah
In miiska ay dhacdo, ay run tahay in xataa tii pachinko ayaa loo maleynayaa tahay in la siiyo in ka badan intii caadiga ahayd. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loola jeedaa in madal oo dhan si ay u habayn sida ma aha dabcan. In, waqtiga ay dhacdo, waxaan eegi doonaa faa'iidooyinka iyo khasaaraha ka dhacay model dhacdo. Isagoo ka hadlayay oo ka mid ah khasaaraha of model dhacdo
, model dhacdo marka ay dhacdo waa ay dhacdo mashiinka soo kabashada.
waa, hoos jira xaalad caadi ah, waxaa badanaa loo arkaa haddii aad leedahay model ah in uusan haysan arrin socda ay dhacdo model ah. Wixii model waxaa hawlgalka lahayn inta lagu guda jiro caadi ah, waxaan leenahay arrin of mishiinka kabashada in piggyback on orodka-up of dhacdo. Intaa waxaa dheer, haddii ay dhacdo in uu yahay ruxruxo xun sababtoo ah ma jiro ilaa waqtiga caadiga ah, waxaa suuro gal ah in maal aad u korodho. Raadinta at
ee sixitaanka tusaale ciddiyaha, waxaa laga yaabaa in ay fududahay in la fahmo sida ugu fiican.
saaray model dhacdo aad u badan iyo tepid, sixitaanka ciddiyaha waqtiga lagu daydo dhacdo in loo tixgeliyaa in complete mashiinka soo kabashada, ama waxaa lagu gabyi keliya dhacdooyinka gobolka si caadi ah oo aan faragalin wax, u badan tahay inuu u taagan ku lifaaqan marka hore a oo keliya, iyo ama in yar furo, cidiyaha in uu is beddelay noqon doonaa oo ku saabsan hal ama laba.
inta lagu guda jiro dhacdo, sababtoo ah fikirka go'an in ay gelin lahaa waxaa gabi ahaanba waa, inaad waxay doonaan inay maalgashi ka badan intii caadiga ahayd ceyrsaneysa. In kooxda martida pachinko ah, laakiin waa ujeedada.
haddii musmaarrada waa dhagan, model dhacdo waxaa fogaaday, waxaa lagu talinayaa in ay ku dhaceen model ah iyadoo la hubo, sida lagu daydo boorarka. Sidaas in aanu ku haboon ma gelin noocan oo kale ah lagu daydo dhacdo DeMerit, fadlan la aqoonsado in ay si fiican u hubi sixitaanka ee ciddiyaha caadiga ah.
Sidaas daraaddeed, hadlaya mudnaan soo socda, waa ay dhacdo hab buuxda u furan model dhacdo waqtiga dhacdada ah la demiyaa qasadeen. Tan iyo dhacdooyinka in, Waxaan doonayaa inaan isku dayaan in ay darso in tii pachinko. Gaar ahaan, ama waxay leeyihiin mashiinnada cusub ay dhacdo model ah, haddii aad leedahay magaabo-Xintai lagu daydo iyo calaamooyin model ah in lagu daydo ay dhacdo, waxaa la odhan karaa in aad ujeedadoodu model ugu horeysay.
_x00 Waxay dhihi 0D_ sababta lagu daydo sida Maxaa dhacaya haddii Ujeedada model dhacdo hore oo kale, waxaad la socon doonaa waqti caadi ah loola lug.
Waqtiga dhacdada, waa maxay hawlgalka caadiga ah ii waa sidaas oo kale si isnt socda model ah. Maxay yihiin hadalladan aad ku yidhi, Xintai iyo magaabo-Xintai, ayaa sidoo kale lagu daydo oo caan ah sida model ah boor, ayaa sheegay in uu ordo, inkastoo inuu ka tago kordhin in ka badan intii caadiga ahayd. Xaqiiqada ah in sida iman dhicin dhacdooyinka qaabeeyaan model ah waa xaqiiqada ah in ay tahay dhacdo taas oo aad rabto in aad rafcaan ka heshay badan.
sidoo kale si ay u qiimeeyaan hab halis ah qowladda pachinko oo dhan ay dhacdo, waa aragtida ah in si fiican u isticmaalaan. Waqtiga dhacdooyinka daran sida, u badan tahay in uu yimaado furo sidoo kale dhan sixitaanka cidiyaha. Lid ku ah model khasaaro dhacdo, iyadoo cutubyo wax yar uun in sixitaanka caadiga ah ciddiyaha, kuwa kale aan inta badan si buuxda u furan yahay. miiska
in la doorto waa, eegaan xogta halkii eegaya musmaarrada, ayaa sheegay in qofka u qiimeeyaan la ruxruxo ee madal laga yaabaa in mudnaanta. Sidaas, ayaa sidoo kale la mid ah ay dhacdo model ah, waxaad dooran kartaa hal qasaaro qalabka badan kabashada ama faa'iido mashiinka sii daayo badan oo si fiican u aqoonsadaan la guuleystay boqolkiiba aad bay u kala duwan yihiin. miiska D_ in la doorto waa, eegaan xogta halkii eegaya musmaarrada, ayaa sheegay in qofka u qiimeeyaan la ruxruxo ee madal laga yaabaa in mudnaanta. Sidaas, ayaa sidoo kale la mid ah ay dhacdo model ah, waxaad dooran kartaa hal qasaaro qalabka badan kabashada ama faa'iido mashiinka sii daayo badan oo si fiican u aqoonsadaan la guuleystay boqolkiiba aad bay u kala duwan yihiin. miiska D_ in la doorto waa, eegaan xogta halkii eegaya musmaarrada, ayaa sheegay in qofka u qiimeeyaan la ruxruxo ee madal laga yaabaa in mudnaanta. Sidaas, ayaa sidoo kale la mid ah ay dhacdo model ah, waxaad dooran kartaa hal qasaaro qalabka badan kabashada ama faa'iido mashiinka sii daayo badan oo si fiican u aqoonsadaan la guuleystay boqolkiiba aad bay u kala duwan yihiin.